नेपाल आज | ७८ करोड कर तिर्न पत्र आएपछि बेहोस !
७८ करोड कर तिर्न पत्र आएपछि बेहोस !
बाटोमा फेला परेको नागरिकताको दुरुपयोग गरी २ अर्ब ४२ करोडको कारोबार
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारी लीलाप्रसाद श्रेष्ठले गृहजिल्ला पाँचथर छाडेको धेरै वर्ष भइसक्यो । दुई महिनाअघि उनको स्थायी ठेगाना फिदिम–३ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बबरमहलले एउटा पत्र पठायो । संयोगले पत्र आएका वेला उनका दाइ घर पुगेका थिए । उनले सो पत्र काठमाडौं ल्याएर भाइलाई दिए ।
नेपाल स्याटेलाइट नेपाल प्रालिसँग सहकार्य गरी एनसेलको सिम तथा रिचार्ज कार्ड बिक्रीको जिम्मा लिएको सो कम्पनीले नौ महिनामा २ अर्ब ४२ करोडको कारोबार गर्दा एक रुपैयाँ पनि कर तिरेको थिएन । लीलाप्रसाद श्रेष्ठ स्याटेलाइट कम्पनी गएर बुझ्दा विजयनारायण श्रेष्ठ नामका व्यक्तिले कारोबार गरेको खुल्यो । तर, विजयनारायण फेला परेनन् । उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा गएर उजुरी दिए । त्यसपछि अनुसन्धान सुरु भयो । यो खबर आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।